Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u ambabaxay dalka Ethiopia | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u ambabaxay dalka Ethiopia
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u ambabaxay dalka Ethiopia
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ambabaxay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya iyadoo safarkan uu yahay kii labaad ee uu ku tegayo muddo labo toddobaad gudahood ah.
Safarka Madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa salka ku haya ka qayb galka Shir madaxeedka Urur Goboleedka IGAD oo ay ka soo qeybgalayaan madaxda xubnaha ka ah IGAD. Shirweynihii ugu dambeeyay ee ay madaxda dowlad goboleedka IGAD ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho.
Hase yeeshee safarka Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tegey dalka Ethiopia ayaa ah kii afaraad ee uu ku tago sanadkan iyadoo tan iyo markii ololaha doorashada 2016 uu saddex jeer tegey magaalada Addis Ababa.
Dalka Ethiopia ayaa la aaminsan yahay inuu yahay wadan taageersan Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku guuleysto markale doorashada dalka Soomaaliya.
Halka wadanka Isutagga Imaaraadka Carabta oo ka mid ah wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya uu taageersan yahay in ay xilka ugu sareeya dalka Soomaaliya qabtaan musharixiin kale kuwaasoo uu ka mid yahay Ra’iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali.